I-pixel 4, ipixel Buds kunye nePixelbook Go zezinto ezinqabileyo ezisandula ukwenziwa nguGoogle | Iindaba zeGajethi
IPikseli 4, iPixel Buds kunye nePixelbook Go zezinto ezinqabileyo ezisandula ukwenziwa nguGoogle
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, Iilaptop
Emva kweenyanga ezininzi ukuvuza, amarhe kunye nabanye, abafana abavela kwiNtaba yokujonga baveze ngokusesikweni uluhlu olutsha lwee-smartphones ze-2019, uluhlu olwenziwe IPixel 4 kunye nePixel 4 XL apho besele sizazi zonke iinkcukacha.
Kodwa, njenge-Samsung, uGoogle ujolise kwintetho ekuboniseni ukuba ayisiyiyo iPixel 4 kuphela, kodwa kunye noluhlu olutsha lwee-headphone ezingenazingcingo ezibhaptiziweyo IPixel Buds kunye nePixelbook ehlaziyiweyo yiya, afuna ukumisa kuzo zombini iMicrosoft kunye neApple ngaphakathi kweelaptops.
1 Google Pixel 4
1.1 Ukucaciswa kukaGoogle Pixel 4
1.2 Amaxabiso kunye nokufumaneka kweGoogle Pixel 4 kunye nePixel 4 XL
2 Budxi yePixel
3 Pixelbook Yiya
4 I-Mini Nest kaGoogle
Eyona nto intsha inikwa sisizukulwana sesine soluhlu lwePixel ifunyenwe kwifayile ye- Inkqubo yokulawula i-smartphone ngaphandle kokunxibelelana nayo. Njengoko kubonisiwe kwintetho, umsebenzi uyafana kakhulu noko besinokufumana ngaphambili kwi-LG kwaye kutshanje kwiimodeli ezithile zeHuawei kunye neXiaomi.
I-radar kaSoli, njengoko uGoogle ebhaptize obu bugcisa idibanisa inkqubo yokwamkelwa kobuso esivumela ukuba sivule isixhobo sisebenzisa ubuso bethu kwaye sisebenza ngokufana kakhulu naleyo inikwa yiApple kwiiPhones ngobuchwephesha bobuchwephesha bobuso.
Ukuba nguGoogle, imfihlo ihlala inombuzo. Ukuqinisekisa abasebenzisi abathembela kule modeli intsha, isigebenga sokukhangela sithi lonke ulwazi olugcinwe yile nzwa luhlala kwisixhobo Kwaye ayisoze iphume kuyo, kulandela umgaqo-nkqubo we-Apple ofanayo netekhnoloji ye-ID yobuso.
Itekhnoloji yesimbo kwi-smartphone Andiboni ngqondo ingako kuba kulula ukusebenzisana nayo nokuba ubenomnwe omnye ukutsiba ingoma, ukuthoba isandi, ukutshintsha usetyenziso. Nangona kunjalo, kwiscreen esikhudlwana, njengethebhulethi (esingayifuniyo okanye esingayihambisa) unxibelelwano ngezimbo zomzimba zenza ingqiqo ngakumbi.
Olunye uvelwano oluza nolu luhlu lutsha lwePixel ngumsebenzi wesicelo sokurekhoda, umsebenzi lowo uya kuba noxanduva lokushicilela incoko ukuba zibhale, into ebalulekileyo kwiintatheli kunye nabafundi ngokufanayo.
Inoveli yokugqibela ephawuleyo yoluhlu lwePixel 4 ifumaneka kwiscreen, umboniso we-90 Hz olungisa rhoqo kuxhomekeka kuhlobo lomxholo obonisayo, ukunciphisa ubungakanani bebhetri ocinga ukuba lo msebenzi usebenza ngokuqhubeka ngokungeyomfuneko.
Ukucaciswa kukaGoogle Pixel 4
Njengoko bekuqhele ukwenziwa oko kusungulwa imodeli yokuqala, uGoogle uvula ubungakanani obukhulu: IPixel 4 enesikrini esizi-intshi ezi-5,7 kunye nePixel 4 XL enesikrini esizi-intshi ezi-6,3. Esi sizukulwana sitsha soluhlu lwePixel silawulwa yiprosesa yokuqala yeQualcomm ye-Snapdragon 855 processor, oko kukuthi, imodeli yenkqubo esele ifumaneka ukusukela ekuqaleni konyaka kwaye ingeyiyo eyokuhlaziywa kwale processor eyasungulwa kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Ngokubhekisele kwi-RAM, sifumana ngaphakathi I-6 GB yememori, kunqabile ukuba siyithelekisa noninzi lweetheminali eziphezulu ze-Android kwintengiso, kodwa oko kunokuqondwa njengokwaneleyo ukuba sithathela ingqalelo ukuba ayinabunqamlezo bobuqu ngokungathi sifumana uninzi lwabenzi kwaye njengomgaqo jikelele, ukunciphisa ukusebenza kwenkqubo, kungoko babheja ukongeza i-RAM.
Ukuba sithetha ngokugcinwa kwangaphakathi, siyabona ukuba njani UGoogle usatshiphu kakhulu malunga noku, njengeApple, kwaye isinika njengemodeli esisiseko kuphela ye-64 GB yokugcina. Imodeli ephezulu isinika ukuya kuthi ga kwi-128 GB yokugcina.
Ngokubhekisele kwicandelo lokufota, UGoogle ufake iikhamera ezimbini okokuqala kodwa ayikhange ilandele umkhondo wokongeza i-engile ebanzi, njengoko uninzi lweziphelo eziphezulu kwimarike, zombini i-Android kunye ne-Apple ye-iPhone.
Amaxabiso kunye nokufumaneka kweGoogle Pixel 4 kunye nePixel 4 XL
IPixel 4 yile ifumaneka ngemibala emithathu: emnyama, emhlophe kunye neorenji kwaye iya kufika kwintengiso ngo-Okthobha i-24 ngala maxabiso alandelayo kuxhomekeke kwiimodeli:
I-Google Pixel 4 ene-64 GB yokugcina i-euro ezingama-759
I-Google Pixel 4 ene-128 GB yokugcina i-euro ezingama-859
I-Google Pixel 4 XL ene-64 GB yokugcina i-899 euro
I-Google Pixel 4 XL ene-64 GB yokugcina i-999 euro
Ukuzinikela kukaGoogle kwii-headphone ezingenazingcingo kubizwa ngokuba yiPixel Buds kwaye ke yongeza kwisibonelelo esinokuthi sisifumane kwimarike enje I-Apple AirPods kunye ne-Samsung Galaxy Buds. Kungekudala ziyakwenziwa yiAmazon Echo Buds eyaziswa yi-e-commerce kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Njengabaninzi abakhuphisana nabo, iPixel Buds basinika ukuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-5 kunye neeyure ezingama-24 zizonke ngetyala lokutshaja. Njengoko kulindelwe, ziyahambelana noMncedisi kaGoogle. Abanayo inkqubo yokurhoxisa ingxolo kwaye baya kufika kwintengiso kwintwasahlobo elandelayo. Ixabiso: $ 179, ixabiso elifanayo apho sinokufumana khona iApple AirPods ngoku.
Ukuhamba okuphinda kuphindwe emva kokungaphumeleli kwesizukulwane sokuqala sePixelbook, abafana abavela kwiNtaba yeNtaba baveze iPixelbook Go, ilaptop ebuyayo ilawulwa yi-ChromeOSInkqubo yokusebenza efanelekileyo yeekhompyuter ezingenamandla kangako kubafundi nasezikolweni, kodwa hayi njengesisombululo somntu ofuna ilaptop. Ingxaki ayikho enye ngaphandle ukunqongophala kweeapps.
Ngelixa kuyinyani ukuba le nkqubo yokusebenza kaGoogle unokufikelela ngqo kwiVenkile yokudlala, Uninzi lwezicelo esinokuzifumana, umzekelo, malunga nokuhlelwa kwevidiyo zishiya okuninzi okunqwenelekayo xa sizithelekisa nezo zifumaneka kwiVenkile yeApple yeApple. Ngethemba, njenge-genbookbook yokuqala, vumela ukufaka ikopi yeWindows, kuba kungenjalo, impumelelo encinci okanye akukho iya kuba nayo kwintengiso, njengesizukulwana sokuqala.
IPixelbook Go isinika isikrini sokuchukumisa esingu-13,3-intshi ngesisombululo esipheleleyo se-HD kwaye silawulwa yi I-Intel Core M3 / i5 / i7 kuxhomekeke kuqwalaselo esiludingayo. Ngokubhekisele kwi-RAM, isinika iinguqulelo ezimbini: 8 kunye ne-16 GB. Ukugcinwa luhlobo lwe-SSD ye-64, 128 kunye ne-256 GB.
Ibhetri ifikelela, ngokutsho komenzi, iiyure ezili-12Inekhamera yangaphambili eyi-2 mpx, ilawulwa yiChannelOS, inezibuko ezimbini ze-USB-C kunye nonxibelelwano lwejack 3,5mm. Imodeli yexabiso eliphantsi, ene-Intel Core M3 processor, i-8 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina, inexabiso elingama- $ 649. Okwangoku, akukho mhla wokukhutshwa ngokusemthethweni ngaphandle kwe-United States.
I-Mini Nest kaGoogle
UGoogle uthathe ithuba lomnyhadala ukubonisa isizukulwana sesibini sesona sithethi sinexabiso eliphantsi esinikwe kwintengiso: Google Nest Mini. Esi sizukulwana sesibini, esigcina ixabiso lokuqala, sisinika njengeyona nto intsha inoveli chip entsha eya kujongana nokulawulwa kwezicelo apha ekhayaNgaphandle kokuzithumela kwilifu ukuze zizicubungule, into efana kakhulu naleyo sele isinike yona iPixel 3 kunye nePixel 3 XL.
Oku kukuvumela ukuba ube ngokukhawuleza okukhulu kunakwisizukulwana sokuqala ekuphenduleni imibuzo yethu. Enye into entsha esisinika yona ifumaneka ngasemva, umva obandakanya umngxunya ukuxhoma isithethi eludongeni. Ngale ntshukumo, uGoogle ufuna wonke umntu ukuba abeneGoogle Nest Mini nakweliphi na igumbi ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IPikseli 4, iPixel Buds kunye nePixelbook Go zezinto ezinqabileyo ezisandula ukwenziwa nguGoogle
Le yeyona "unboxing" yokuqala yeHuawei Mate X
Uhlalutyo lweBhokisi yeZilwanyana zangaphandle zeSistim yamandla